INhloko yaseSikoleni SezobuHlengikazi NezeMpilo YoMphakathi, uSolwazi Mosa Moshabela, noSolwazi Lucy Gilson wase-UCT waseSikoleni SezobuHlengikazi NezeMpilo YoMphakathi bahole isithangami sezobuchwepheshe besimanje ngezempilo emhlabeni, intuthuthuko nokuthathwa kwamazwe abantu.
Le nkulumo idingide indaba yamandla negunya, igxile ekusabalaliseni kabusha amandla ngendlela eyimpumelelo emazingeni asemhlabeni jikelele, akazwelonke nawezindawo ezempilo emhlabeni.
U-Gilson ukhulume ngezempilo nohlelo lwezempilo. ‘Ezempilo imvamisa zisho lezo zinto eziphathelene nezempilo ezenziwa ngabezempilo okungaba wukubona nesiguli noma ukunikeza isiguli imithi, kanti uhlelo luthinta izinto eziningi.'
Uthe amagama athi “ezempilo” nelithi “uhlelo lwezempilo” avame ukusetshenziswa ngokushintshaniswa. ‘Abanye abantu bathi “izinhlelo zezempilo” yitemu elibanzi elihlanganisa ezempilo zomphakathi kanti elithi “uhlelo lwezempilo” ligcizelela kakhulu izinsiza ezithinta ukwelapha isiguli.
UMoshabela ongudokotela oqeqeshiwe ulande ngokuthi izinto ezenzeka ngenkathi ekhula emakhaya zaba nomthelela onjani endleleni acabanga ngayo ngempilo, amandla nokuba nokuma kahle.
‘Esikwazisayo sikubona kubaluleke kakhulu kunalokhu okwaziswa ngabanye abantu. Kwesinye isikhathi kubalulekile ukuqonda izindlela zabanye abantu nokwazi ukuthi yini eyaziswa ngabanye abantu ungazami ukuphoqa izindlela zakho’ kusho yena. ‘Kubalulekile ukwazi ngeziguli zakho, uzazi ukuthi zingobani, wazi nemvelaphi yazo.’
UMoshabela uthe abantu abaningi babona imitholampilo nezibhedlela njengezindawo ezifunza abantu izindlela zabelungu. Ukwelaphela abantu emakhaya kwakuhlule kakhulu kunalokhu okwenzeka emitholampilo nasezibhedlela manje. ‘Ezempilo azisho ukuhlenga impilo kuphela kepha futhi zisho ukunika isithunzi ngendlela esenza ngayo uma sineziguli zethu,’ kusho yena.
U-Gilson uthe abantu abasebenza kwezempilo kufanele baqonde kangcono amasiko nomhlando weziguli zabo.
UMoshabela uxoxe ngezinyanga ezintathu e-Columbia University e-New York City, lapho afunda khona lukhulu ngabantu bakhona, wathekela olwazini lwabo nasendleleni abenza izinto ngayo.
Ukhulume ngokuba nenhlanhla yokufunda nokukwazi ukusiza abanye abantu, wathi abantu abangadidwa ngamandla email yabaxhasi.
Ukuthola ingxoxo ephelele, ngena lapha: Cindezela lapha.